Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izigidi eziyi-13.3 zabantu abafikile baseYurophu abazohambisa ukuvuselelwa kwezokuvakasha eGulf
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba zeBahrain Breaking • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Ze-Kuwait • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindaba Ze-Oman • Abantu • Izindaba zaseQatar • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • I-Saudi Arabia Breaking News • Shopping • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UAE Breaking
Izigidi eziyi-13.3 zabantu abafikile baseYurophu abazohambisa ukuvuselelwa kwezokuvakasha eGulf.
Amazwe akwi-GCC afaka phakathi i-United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait neBahrain futhi onke anikela ngezinhlobo eziningi zezinketho zezindiza kanye nomkhiqizo wezokuvakasha ohlukahlukene, onxenxa abahambi baseYurophu.
Abahambi baseYurophu bazoba ngumshayeli ophambili wokuvuselelwa kwezokuvakasha kwezifunda ze-GCC kusuka ku-COVID-19.
Ku-2019 ukufika kwangaphambi kobhadane kusuka eYurophu kuya emazweni e-GCC kwafinyelela izivakashi eziyizigidi eziyi-11.8.
Ukufika kwangemva kobhadane kulindeleke ukuthi kutholakale izivakashi eziyizigidi eziyi-13.3 ngonyaka ka-2024, okuyizinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe (CAGR) elingu-17.5%.
Abahambi baseYurophu babekelwe ukuba babe yimakethe esemqoka yomthombo esifundeni seGulf, ikakhulukazi Umkhandlu Wokubambisana weGulf (GCC) amazwe, azosiza ukuvuselelwa komkhakha wabo wokuvakasha kwezimboni zezifo. Amazwe aku-GCC afaka i-United Arab Emirates, I-Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait neBahrain futhi zonke zinikeza uhla oluhle lwezinketho zezindiza kanye nomkhiqizo wezokuvakasha ohlukahlukene, othanda abahambi baseYurophu.
Imininingwane yakamuva yemboni yembula ukuthi ngonyaka we-2019 abafika ngaphambi komqedazwe abavela eYurophu baya emazweni e-GCC bafinyelela izivakashi eziyizigidi eziyi-11.8. Ngo-2020, abafikayo bawela ezigidini ezingama-3.9 ngenxa yalolu bhubhane, ukwehla okungama-67% konyaka nonyaka (YOY), kodwa-ke, ukufika okufika ngemuva komqedazwe kulindeleke ukuthi kutholakale izivakashi eziyizigidi eziyi-13.3 ngonyaka ka-2024, okuyizinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe (i-CAGR ka-17.5%.
Njengoba kunikezwe amazinga aphezulu okukhula okulindelwe kubahambi baseYurophu abangena I-GCC amazwe eminyakeni emithathu ezayo, bazoba yingqophamlando yokuvuselelwa kwezokuvakasha kwezifunda kusuka ku-COVID-19. Izwe elilodwa elibaluleke kakhulu esifundeni yi-UK njengoba izibikezelo zakamuva zale mboni zibonisa ukuthi abafika e-UK emazweni e-GCC bazofinyelela ezigidini ezi-3 ngonyaka we-2024 i-CAGR engu-21.7%.
UK izihambi bezilokhu zikhangwa njalo I-GCC amazwe njengoba enikeza isiphakamiso sezokuvakasha ezahlukahlukene selanga lasehlobo nasebusika, ngamabhishi amahle, amadolobha amakhulu nemisebenzi ye-adventure. Ubuningi kanye nesimo seDubai esinamahhotela okunethezeka kanye nokuhlangenwe nakho okuhle okumelwe kukunikeze nakho kuyathandwa ngabahambi base-UK.
Amazwe aphesheya kwe-GCC anokuningi kokuheha abaseYurophu, ngokuxubana kwemisebenzi kusuka eholidini lolwandle lendabuko kuya kokuhlangenwe nakho kwamasiko okunikezwa amasiko ezifunda nomlando. Lokhu kuzolisiza ukuthi liphinde lithandwe ngokushesha kunalezo zindawo ezinikeza kuphela isipiliyoni sedolobha.